I-busty encane iyinkimbinkimbi yamantombazane amaningi, abesaba kakhulu kakhulu futhi abhekwa njengenhloko enkulu. Kodwa-ke ufuna ukuzwakala ngokuzwakalayo kanye nezwe lonke ukuthi liphutha kakhulu. Isibonelo esicacile salokhu singakhonza ngokuphepha abanikazi abathandwayo bama-busts amancane, abameleli babo abazizwa bengathandeki kulokhu, futhi ngokuphambene nalokho, babhekwa njengamantombazane amahle kakhulu kunawo wonke emhlabeni. Ngakho-ke, sijwayelane nabahlonishwa abadumile abayishumi abangakwazi ukuziqhayisa ngobubunjwa bobubele babo.
Abanikazi bethu abayishumi abadumile bamabhasi amancane babandakanya:
6. URenee Zellweger;
9. UMilla Jovovich;
Nakhu, amantombazane adumile ayishumi nambili aphethe isifuba esincane. Kodwa, naphezu kwalokhu kunqamuleka, abadlali bezintandokazi zalezi zinsuku zithandwa kakhulu phakathi kwesilisa besilisa, futhi eziningi zazo zikhona ohlwini lwezwe lama-actress amahle kunazo zonke, azintandokazi nezomculo. Ngakho-ke, sicabanga ukuthi phakathi kwabanikazi abajwayelekile besifuba esincane kuzoba nengxenye enkulu yalabo abazoyeka ukubheka ukukhubazeka kwabo okuncane ngendlela engavumelekile. Ngendlela, ngenhla okushiwo "izindleko" zamabhasi amancane azizitholi ngokwabo nale nkinga nhlobo.
Futhi manje ake sihlolisise izinkanyezi ezidumile nabesifazane bezwe, abanikazi bezimpahla ezincane zesifuba.
Umlingisi waseMelika wazalwa ngo-Ephreli 9, 1990 eLos Angeles (USA). Ku-akhawunti ye-actress mayelana nezindima ezingu-40. Ukuphakama okukhulu kukaChristine kwaletha indima kaSarah Altman kule filimu "Igumbi Lokwesaba" (2002). Ngo-2010, umdlali we-actress wathola umklomelo we- "BAFTA" ekuphakanyisweni kwe- "Rising Star". Inkazimulo enkulu yathinjwa uKristin ngemuva kokudinga amafilimu iTwilight (indima yeBella Swan), lapho edlala khona noRobert Pattinson. Ngendlela, umshini wephephandaba ukhulume ngomshado kaKristin noRobert kaningi. Abadlali abakho ngokwabo, bamane, bathule.
I-Supermodel ne-actress bazalwa ngoJanuwari 16, 1974 edolobheni laseCroydon (eNgilandi). Naphezu kokuthi uK Kate ukhona ohlwini lwabanikazi bamabhasi amancane - akumvimbeli ukuba enze ibhizinisi lemodeli ngempumelelo nokudubula ngesikhathi esithile kumafilimu. Ngendlela, uMoss uvame ukuhoxiswa uhamba nge-naked for the cover of the magazine's popular in the world. Ngonyaka odlule, uKate wayekuloluhlu lwamamodeli wezwe acebile kakhulu.
Eyaziwa ngokuthi "socialite", ethandwa eRussia, umethuli we-TV nomdlali wezithombe uKsenia Sobchak wazalelwa ngo-November 5, 1981 eSt. Petersburg (eRussia). Ngaphezu kokuqopha kuma-movie, uKsenia uqhuba imibukiso ethandwayo kuthelevishini yaseRussia. Futhi mayelana nokubukeka kwabo, "ingonyama yezwe" ayingakaqedi. Izithombe zakhe ezithandekayo zingatholakala kumamagazini amaningi omuntu odumile.
Umlingisi, umdwebi wesikrini, umqondisi, umkhiqizi, imodeli kanye nomculi wesikhathi esithile, wazalwa ngo-Ephreli 30, 1982 e Point Point, eNew Jersey (USA). Ngo-1996, umagazini owaziwayo othi "Abantu" wabiza uKristen intombazane enhle kakhulu. Ngendlela, ukuqoshwa kwamafilimu amaningi, umlingisi kwakudingeka enze amabele akhe ukuze enze avele avele ekhudlwana esikrinini. Kodwa ebhizinisini lokulinganisa uKristen uya esikhwameni esembathweni esicacile njengalokhu kunjalo.
U-actrice owazalwa ngo-Ephreli 19, 1979 eLos Angeles (USA). Naphezu kokuthi umlingisi ungomunye wamantombazane ayishumi nambili aphethe isifuba esincane, lokhu akumvimbeli ukuba athandwe kakhulu phakathi kwababukeli beqiniso bobuhle besifazane. Kungenzeka ukuthi ngenxa yalesi sizathu ukuthi uK Kate wayengakaze abonwe ohlwini lwabadlali abahle kakhulu. Ngendlela, u-Hudson uyajabula ngombono wakhe ngokuphelele futhi akahlose ukushintsha noma yini.
U-Born Renee ngo-Ephreli 25, 1969 eKathy Texas (USA). Ku-akhawunti yenkanyezi kukhona "i-Oscar", eyamukelwa ngonyaka ka-2003, ekuphakanyeleni "Umdlali Omusha Osekelayo" ("Cold Mountain" njengeRuby Theus). URene akakhathazeki ngokubukeka kwakhe nhlobo. Uma kunesidingo sendima, kuzothatha isisindo kalula futhi nje ukusilahle. Kodwa, noma kunjalo, i-plump Renee isengomunye wabanikazi bamabhasi amancane.
Usuku lokuzalwa ngoJuni 9, 1981 eJerusalema (Israyeli). Imisebenzi yakhe ethandwa kakhulu yilezi: Matilda efilimu ethi "Leon" (1994), Alice Ayres - "Proximity" (2004), le ndima yaletha uNatalie i-Golden Globe Award kanye ne-BAFTA ne-Oscar. Ngomsebenzi kaNina kule filimu "I-Black Swan" (2011), lo mdlali wesifazane uthola "i-Oscar" ekukhetheni "Best Actress". U-Natalie uvame ukukhishwa ngezigcawu zefilimu, futhi mayelana namafomu akhe amancane aphendula ngokujabula okukhulu.
Wazalwa ngoMashi 26, 1985 eLondon (England). Ukuphakama kokudunyiswa kukaKoreshi kwaletha imisebenzi emafilimu athi "iNkosi Arthur", nazo zonke izingxenye ze "Pirates of the Caribbean".
Umdlali we-actress uyinkosikazi ehloniphekile yegama labadlali abadume kakhulu futhi abahle kakhulu emhlabeni, futhi ngesikhathi esisodwa - isikhungo esincane. U-Kira uvame ukuhoxisa uhamba futhi engakhathazeki kancane ngenxa yamabele akhe. Kodwa kumaPirates of the Caribbean, umculi wezemidlalo wayenwe ngamapayipi akhethekile.
UMila wazalwa ngoDisemba 17, 1975 eKiev (Ukraine). Indima ethandwa kakhulu yiyona nendima ka-Alice kuzo zonke izingxenye zefilimu yesenzo esiphundu "u-Evil Evil".
Umdlali we-actress uthathe indawo ebaluleke kakhulu ohlwini lwethu "lwamabhasi amancane". Kodwa, naphezu kokuntuleka kwesibalo, uJovovich akayena nje umdlali wesithandwa, kodwa futhi nomfanekiso, ngisho nomklami. I-Milo ivame ukubonwa emaphepheni amnandi okomagazini.
Futhi uqedela uhlu lwethu lwamaninindlu abanikazi bomdlali omncane waseMelika, ohlangene - umculi, umbhali wezingoma kanye nomodeli wefashini, ngisho nomklami weParis Hilton . I-actress ehlaselwe yinto ekhwabanisayo ngoFebhuwari 17, 1981 eNew York (USA).
Naphezu kokuncane kwesifuba, iParis ngokuvamile ibonisa izinkontileka nezinhlangano ezidumile zama-model kanye namafemu omkhiqizo. Yena, ngaphezu kwemibukiso ehlukahlukene kanye nezindima emafilimu, cishe ukhanya njalo ekukhangiseni nasezikhungweni zamamagazini wesilisa.
Izinkanyezi Lindsay Lohan noScarlett Johansson
Izinkanyezi ngaphandle kwe-Photoshop
I-Biography kaVasilyeva Catherine
Indodakazi kaMama, uMila Jovovich
Imifula yamanzi omkhumbi we-antibiotic therapy: inzuzo noma ukulimala
Isithombe seFashion uFiliphu Kirkorov sasihlekwa usulu ngabalandeli baka-Albina Dzhanabaeva
Amathiphu kubazali, indlela yokugqoka ingane ebusika
Indodakazi kaMaxim Galkin Lisa - umlingisi ka-Elena Malysheva, ividiyo
Iklabishi elithambile ngenyama ebhemayo
Yimuphi i-humidifier ye-air okufanele ngiyikhethe?
Isaladi nge-yenkomo ne-omelette
U-Stas Kostyushkin uboshwe ezimweni ezimbi kakhulu
Amathiphu awusizo kubafana namantombazane
Izingane zivame ukuvusa futhi zikhale
Indodana Ingeborga Dapkunaite: Umdlali wesifazane oneminyaka engu-55 ubudala ube nomntwana
Ngingakugwema yini izifo ezivamile ezikoleni?